China kpachara anya na-akwụ ụgwọ ekwentị ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | APS
Kpachara anya maka ego ndị na-akwụ ụgwọ ekwentị
O meela anyi niile. Na-apụ na banyere na-aghọta na ekwentị gị na-agba ọsọ dị ala. A na-ahụkarị ya mgbe ị na-eme njem. Ebe a na-eche ọdụ ụgbọ elu na-enwekarị ụyọkọ nke ndị na-awagharị awagharị na gburugburu ebe a na-arụ ọrụ na ike.
O di nwute, ojoro a na-akpọ "ihe nkedo ihe ọ juiceụ juiceụ" na-eme ka ichota ekwentị gi ma obu mbadamba ihe gi. Ihe ọ Juụụ ihe ọ happensụ happensụ na-eme mgbe ọdụ ụgbọ mmiri USB ma ọ bụ eriri na-ebute malware. Mgbe ị pịnye n'ime oria USB ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ndị aghụghọ ahụ nọ. E nwere ụdị egwu dị iche iche 2. Otu bụ izu ohi data, ọ bụkwa ihe ọ dị ka ọ dị. Ikwunye n'ime ọdụ ụgbọ mmiri rụrụ arụ ma ọ bụ eriri nwere ike zuo okwuntughe gị ma ọ bụ data ndị ọzọ. Nke abụọ bụ ntinye malware. Mgbe ijikọ na ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ eriri, arụnyere malware na ngwaọrụ gị. Ọbụna mgbe ị kwụsịrị, malware ga-anọ na ngwaọrụ ahụ ruo mgbe i wepụrụ ya.
Ruo ugbu a, ịpị ihe ọ juiceụ juiceụ abụghị ihe a na-eme ebe niile. The Wall of Sheep hacking group gosipụtara na ọ ga-ekwe omume, ya mere ọha na eze kwesịrị ịkpachara anya-ọkachasị ebe ọ bụ na eriri USB adịghị njọ.
Olee ot you ui ga-esi chebe onwe gi?
1.Were chaja chaja na car chargers with you when you’re traveling.
2. Ejila eriri ndị dị na ebe ọha na eze.
3.Eji Wall Chargers, ọ bụghị ọdụ USB na-akwụ ụgwọ, mgbe ekwentị gị dị ala.
4. Tinye ego na batrị obere batrị ma debe ya na mberede.
5.Enwe ihe mgbochi-malware ngwa dị ka Malwarebytes na ngwaọrụ gị na-agba ọsọ na-enyocha kwa mgbe.
Fast n'Aka PCB Desgin , Desgined USB chaja , Mobile chaja , Fast n'Aka Car chaja na USB , nkwụnye Adatpter PCBA , USB nkwụnye ,